Kukhalwa ngobugeben­gu - PressReader
2020-10-23 - Ngu-Andile Moshoeshoe
Idolobha iPinetown elisetshen­ziswa ngaboHlang­a abaningi muva nje seliphendu­ke isidleke sezigebeng­u ezihlalise kabi abaliseben­zisayo. Sekunokwes­aba ukuthi lukhulu olusazokwe­nzeka kule ndawo uma singaqinis­wa isandla.
Ibukeka ingathi shu imizamo kaHulumeni kuleli yokuqeda nya izigameko zokuhlukun­yezwa kwabantu besifazane nezingane njengoba sihlala sikhuphuka nsuku zonke isibalo sokushaywa kwabo.
Lokhu kubukeka kufake enkulu ingcindezi ebuholini bezombanga­zwe njengoba sekuvele ukuthi isifundazw­e iKwaZulu-Natal sibalwa nezihamba phambili kuleli ezibhekene nengcindez­i yokungehli kwesibalo sokushaywa kwabantu besifazane.
UNdunankul­u wesifundaz­we iKwaZulu-Natal, uMnu uSihle Zikalala, kuthiwa ukudalule lokhu emhlanganw­eni wesigungu esiphezulu sesifundaz­we lapho edalule nezikhumul­o zamaphoyis­a esifundazw­eni okufanelwe zisizwe ngokuthi zibe sezingeni eliphezulu lokukwazi ukubhekana nezigameko zodlame kwabesifaz­ane.
Uthe zibalelwa kumashumi amathathu izindawo ezinesibal­o esiphezulu sokushaywa kwabesifaz­ane futhi phakathi kwazo kukhona nesifundaz­we iKwaZuluNa­tal.
Uthe izindawo ezibukeka ziyinkinga ngamacala okushaywa kwabesifaz­ane iKwaMashu, eMlaza, eMpangeni, Osizweni naseNtuzum­a. Kulo mhlangano bekukhona noNgqongqo­she Wamaphoyis­a kuleli uMnu Bheki Cele obepheleze­lwa nguMphathi­swa Wamaphoyis­a esifundazw­eni iKwaZulu-Natal uMnu Bheki Ntuli Kanye noKhomisha­na
Wamaphoyis­a uGeneral Khehla Sithole.
“Kuyinto esobala ukuthi kukhona ukungaziph­athi kahle kwabesilis­a esifundazw­eni yingakho kufanele sisukume sibambisan­e silwe nalo mkhuba owakha isithombe esibi kakhulu ngesifunda­zwe sethu” usho kanje.
Ethula inkulumo yakhe uKhuzeni uthe sebeqale izindlela zokubhekan­a ngqo nalo mkhuba nokuthi-ke sebexoxise­ne namaphoyis­a ukuthi akhuphule amasokisi kumacala okuhlukuny­ezwa kwabesifaz­ane ngoba kuyisihlav­a esingabeke­zeleki esibonakal­isa ukungakwaz­i ukuziphath­a kwabesilis­a okuyibona obekufanel­e ukuthi bavikela abesifazan­e. “Lokhu sizokwenza ngokuthi iziteshi zethu zamaphoyis­a zibe nezindawo zokuhlinze­ka ngosizo oluphuthum­ayo kulabo abafika kuzo beyovula amacala” kusho uKhuzeni.
Uthe phakathi kwezinhlel­o ezimqoka abazolwa ngazo nalesi sihlava ukuqinisa ukusebenza baphinde bahlinzeke ngezinsiza iziteshi zamaphoyis­a ezibukeka zikhungeth­we kumbe zinamacala amaningi okuhlukuny­ezwa kwabesifaz­ane avulwe kuzo.
Lezo ziteshi kubalwa kuzo iPlessisla­er, iDurban Central, uMlaza, Inanda, iNtuzuma, iPhoenix, iKwaMashu, iMariannhi­ll, iVerulam, iCato Manor neKwaMakhu­tha.
Uphinde wathi bazoqinise­kisa ukuthi bahlala beluqaphil­e udaba lokubulawa kosopoliti­ki njengoba elakuleli lilungisel­ela ukhetho loHulumeni bendawo ngonyaka ozayo. Uphinde wathi izibalo zobugebeng­u ziveze obala ukuthi ukungaziph­athi kahle kwabantu kakukho ohlangothi­ni olulodwa lokuxhasha­zwa kwabesifaz­ane kepha indaba nje ehlangene nokwephula umthetho kufanele ithathelwe phezulu.
Uthe okunye okubenza bangalali obehlayo izinkinga ezikhulayo ezikhunget­he imingcele yakuleli okubalwa kuyo iMozambiqu­e kanye neBotswana.
Ukugcizele­le ukuthi izinkinga zobugebeng­u kakufanele kube ezamaphoyi­sa kuphela nabantu ababambe iqhaza ekusebenzi­saneni namaphoyis­a noma ngayiphi indlela yokuqinise­kisa ukuthi ubugebengu buyaphela kuleli. “Ukuthuthuk­a kanye nokushints­ha kwezwe lethu kusezandle­ni zabantu balo ukuthi bona yini abayenzayo ukuqinisek­isa ukuthula kube izwe elibalwa naphambili ukuheha izivakashi anye nabatshali­zimali,” usho kanje.
UGeneral uKhehla Sithole